Posted by PhyoPhyo at Wednesday, September 28, 2011 Labels: အထွေထွေမှတ်စု
မော်နီတာဂျာနယ် (18.9.2011. Sunday)
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, September 20, 2011 Labels: ဟိုဟို ဒီဒီ
Deadly earthquake rocks India, Nepal and Tibet Dozens of people have been killed and many more injured afteramagnitude 6.9 earthquake shook north-eastern India, Nepal and Tibet.
Posted by PhyoPhyo at Sunday, September 11, 2011
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)က cbox ထဲမှာ လာအော်သွားမှ tag ထားတာသိလိုက်ပါတယ်။
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) ရေ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ပါနော်။
Posted by PhyoPhyo at Thursday, September 08, 2011 Labels: ဟိုသတင်း ဒီသတင်း
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ လောစ့်အိန်ဂျယ်လိစ်မှာ သြဂုတ် ၁၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Do Something ဆုတံဆိပ်ပေးပွဲညမှာ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကို မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေပြည့်နေတဲ့ မီးရောင်စုံညတစ်ညမှာ ဘောလုံးသွေးကြွယ်ဝလှတဲ့ ဘက်ခမ်းက သားကြီး ဘရွတ်ကလင်းနဲ့အတူ ဟောလိဝုဒ်ပယ်လာဒီယမ်ခန်းမကို တက်ရောက်လာခဲ့တယ်။